Malunga neHolley-Holley Technology Ltd.
Enye yeumbane omkhuluimitha abavelisi kunye nababoneleli e China
IHolley Technology Ltd.lilungu eliphambili kwishishini leHolley Group.
Ngenjongo yokuba ngumboneleli okhokelayo wehlabathi weemitha kunye neenkqubo, uHolley ujonge phambili ekusekeni ubudlelwane beshishini eliluncedo kunye namaqabane avela kwihlabathi liphela.
Ubuchule obunamandla be-R & D
Inkqubo yomgangatho ongqongqo
Izixhobo zoMveliso eziPhezulu
Holley ukwakhainqanaba eliphambiliyeemveliso zayo kushishino.
Isekwe njengomvelisi weemitha zemveli ngo-1970 e-Hangzhou, e-China, i-Holley ngoku iguqulwe yaba yinkampani yamashishini amaninzi kunye ne-high-tech.IHolley yenye yeyona mitha yombane inkulu eyenziwa eTshayina enokhuphiswano oluphezulu lwamazwe ngamazwe oluthumela kumazwe angaphezu kwama-60 ehlabathini.
I-Holley ibandakanyeka kuphando kunye nophuhliso, ukuveliswa, kunye nokuthengiswa kweemitha zokulinganisa iqulethe imitha yombane, imitha yegesi, imitha yamanzi, izincedisi zegridi yamandla, njl njl. Kwakhona sibonelela ngesisombululo senkqubo kubathengi abahlukeneyo.
itekhnoloji yethu iphumelele iimpawu zorhwebo ezaziwayo-kakuhle, uphawu odumileyo, ishishini China ingqibelelo umgangatho, ukuvunywa kwilabhoratri yeSizwe, iziko lophando lweshishini lephondo kunye namanye amawonga, kunye neChinese Academy of Sciences, iYunivesithi yaseZhejiang, iilabhoratri zeKEMA eHolland kunye namanye amaziko ane waseka ubudlelwane bexesha elide kunye noHolley.